शब्दसारथि - विकिपिडिया
लेखको शीर्ष भागले सामग्रीको विस्तृत विवरण दिइरहेको छैन । कृपया, शीर्ष लेखलाई बढाउनुहोस् जसले लेखको उपयुक्त वर्णन गरोस् । (अक्टोबर २०१५)
शब्दसारथि साहित्यिक पत्रिका हो । यो पत्रिका रोल्पा जिल्लामा दर्ता भई त्रैमासिक रूपमा प्रकाशन भइरहेको छ । यसको 'जि.प्रशा.का. रोल्पा द.नं‌. १२/०७१/७२' हो । जिल्ला प्रशासनबाट मिति २०७२ असार २९ गते दर्ता भई पहिलो अंक '२०७२ साउन-असोज'बाट भएको थियो ।
ललित साहित्य परिषद्, रोल्पाले प्रकाशन गर्दै आएको यस पत्रिकाको सम्पादकमा डी.बी. टुहुरो छन् भने यस पत्रिकाको सहसम्पादकमा ओम के.सी. र खेमराज गाउँले छन् । त्यस्तै यस पत्रिकाको व्यवस्थापकमा लोक आलोक छन् ।
‍‍‍‍===प्रकाशित अंकहर===[सम्पादन गर्ने]
वर्ष-१, अंक-१ (२०७२ साउन-असोज)
वर्ष-१, अंक-२ (२०७२ कात्तिक-पौष)
"https://ne.bywiki.com/w/index.php?title=शब्दसारथि&oldid=506231" बाट निकालिएको
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०५:०५, ३० अक्टोबर २०१५ मा परिवर्तन गरिएको थियो।